Haweeney Ethiopian dishay cunugeeda, kuna cabaysay sanduuq – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Wargeyska Khaleej times ee ka soo baxa dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta qoray in Haweeney u dhalatay dalka Ethiopia lagu soo oogay inay dishay ilmo hal bil jir ah, kadibna inta ku cabaysay saanduuq ku tuurtay meel biyo-mareen ah oo ku yaalla magaalladda Sharjah.
Hadal ka soo baxay Boliska Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay inay Haweeneydaasi dhagax ku riday Shandada, ka hor intaysan ku tuurin goobta biyo-mareenka ahaa.
Haweeneydaasi oo da’da 20-aadka ku jirtay ayaa u sheegtay Boliska inuu xiriir dhex maray nin ay saaxiibo ahaayeen. Xilli ay Jaariyad ahaan ugu shaqeynaysay Qoys u dhashay Iimaaraadka.
Waxay sheegtay in ninka ay xiriirkii saaxiibtinimadda lahaayeen uu xiriirka u gooyey, markii uu ogaaday inay uur leedahay.
Haweeneydaasi oo magaceeda la qariyey, balse la soo bandhigay sawirkeeda oo indhaha khadka madow laga mariyey ayaa sheegtay inay iyada iyo haweeneydii u fududeysay inay dhasho isla garteen inay labadooda dilaan ilmihii yaraa, kuna tuuraan biyo-mareenka Heera ee magaalladda Sharjah.
Boliska Imaaraadka Carabta ayaa ku guuleystay inay maydka ilmihii yaraa dhigaan Isbitaalka Al-qasimi Hospital, iyadoo ay Dhakhaatiirta sheegeen in ilmaha yar la dilay.
Baaritaan ay Boliska sameeyeen ayey ku soo heleen, kuna soo xireen Lammaanihii dhalay ilmaha la dilay, iyadoo baaritaanka Dheecaanka Hiddo-sidaha ee DNA lagu ogaaday inay Haweeneydu tahay hppyadii dhashay ilmaha.
Ninka ay haweeneyda sheegtay inuu isaga ka dhalay ilmaha ay dishay ayaa beeniyey arrinkaasi, wuxuuna sheegay inuu ku soo baraarugay, kadib, markii uu ogaaday inuu uur lahayd.
Wuxuuna sheegay inuusan waxba kala soconin ilmaha la dilay.
Haweenyda ayaa la sheegay inay si sharci-darro ku joogtay dalka Imaaraadka Carabta, kadib, markii uu ka dhamaaday Qandaraaskii Jaariyadda ee ay kula joogtay Qoys Imaaraati ah oo iyagu sheegay inay siiyeen Kharajka Tikidhka si ay ugu laabato Ethiopia, balse ay door biday inay si sharci-darro ah uga shaqeeyo goobo kale.